gmail server ဘယ်လိုထောင်သလဲပာင် [Problem]
Myanmar IT Resource Forum » GENERAL TECHNOLOGY » » Network Engineering » gmail server ဘယ်လိုထောင်သလဲပာင် [Problem]
1 gmail server ဘယ်လိုထောင်သလဲပာင် [Problem] on 5th May 2010, 11:16 am
2 Re: gmail server ဘယ်လိုထောင်သလဲပာင် [Problem] on 5th May 2010, 11:21 am
ဘယ်လို Gmail Server လဲ....
ကိုယ်ပိုင် Mail Server ထောင်ချင်တာကိုပြောတာလား...
မှတ်ချက်။ ။ ဖိုရမ်တွင်း အသစ်ပြောင်းလဲထားသော Tag System ကို လိုက်နာပေးပါခင်ဗျာ..
3 Re: gmail server ဘယ်လိုထောင်သလဲပာင် [Problem] on 5th May 2010, 11:26 am
ဂျီမေးလ်ထဲကိုlogin ၀င်သလိုဝင်နိုင်အောင်webpage တစ်ခုလိုမျိုးပေါ့နော်။
မှားတာရှိရင်ခွင့်လွတ်ပါ။ကျွန်တော်ကအခုမှပို့စ်တင်တာ၂ခုပဲရှိပါသေးတယ်အသစ်တကာအသစ်လေးပါဗျာ။ [You must be registered and logged in to see this image.]
4 Re: gmail server ဘယ်လိုထောင်သလဲပာင် [Problem] on 5th May 2010, 11:29 am
အဲ.... ဘာအတွက်လုပ်ချင်တာလဲ မသိဘူး...
အဲဒီလိုလုပ်ဖို့ဆိုတာ ငွေကြေးရင်းနှီးမှု + ပညာရပ်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှု အများကြီးလိုအပ်တယ်ခင်ဗျ...
Mail Server တွေ အကြောင်းသိရမယ်....
ပြီးရင် Scripting Language သိရမယ်...
Database Management လုပ်တတ်ရမယ်...
လိုအပ်တာတွေ အများကြီးအများကြီးရှိပါသေးတယ်.... ကျွန်တော်တောင် သိပ်မလေ့လာဖူးဘူး.
ဘာအတွက်လုပ်ချင်တာလဲဆိုတာ သိရင်တော့ ထပ်ပြီးအကြံပြုနိုင်မယ်ထင်ပါတယ်.
5 Re: gmail server ဘယ်လိုထောင်သလဲပာင် [Problem] on 5th May 2010, 11:34 am
လည်းပါပါတယ်။အစ်ကို။ အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်လုပ်တတ်တာကတော့ mail server တော့ထောင်တတ်ပါတယ်။အစ်ကိုကျွန်တော့်ကိုကူညီပေးပါနော်။မကောင်းတဲ့စိတ်ကူးတော့ဘာမှမရှိပါဘူး။ပာို
တစ်နေ့ကအိမ်မှာပျင်းလို့web server တို့ဘာတို့ထောင်ရင်းစိတ်ကူးပေါက်သွားတာပါ။ဂျီမေးလ်ဆာဗာ
6 Re: gmail server ဘယ်လိုထောင်သလဲပာင် [Problem] on 5th May 2010, 11:42 am
အဲ့... တစ်ခုခုတော့ လွဲနေပြီ...
ခုလုပ်ချင်တာ Local Server (ကိုယ့် PC မှာကိုယ်လား?) ၊ တစ်ယောက်ထဲ သုံးချင်တယ်ပြောတာလား...
အဲဒါဆိုရင်တော့ အစ်ကို mail server ထောင်တတ်ရင် Local Host လုပ်သလိုဘဲ (ကွဲတော့ကွဲတာပေါ့နော်) ကိုယ့်စက်ထဲ ထောင်ထားလို့ရတယ်လေ...
7 Re: gmail server ဘယ်လိုထောင်သလဲပာင် [Problem] on 5th May 2010, 11:54 am
Linux (Ubuntu) ပေါ်မှာ Mail Server ထောင်တဲ့နည်း....
8 Re: gmail server ဘယ်လိုထောင်သလဲပာင် [Problem] on 5th May 2010, 3:01 pm
သူပြောတာ သူ့ကိုယ်ပိုင် Mail Server တစ်ခုကိုထောင်ပြီး သူများရောင်းစားချင်တာနဲ့တူတယ် ပုဂံလိုပေါ့။
အဲဒါဆို သိရမယ့်ဟာတွေအများကြီးပဲ။ Exchange Server အကြောင်းကိုကောင်းကောင်းနားလည်ရမယ်။ သင်တန်းတက်လိုက်ပါ။
9 Re: gmail server ဘယ်လိုထောင်သလဲပာင် [Problem] on 8th May 2010, 4:36 pm
ကNEတော့ပြီးထားပါတယ်။နောက်ထပ်ဘာထပ်တက်ရမလဲပာင်အစ်ကို။exchange server ကဘယ်လို
10 Re: gmail server ဘယ်လိုထောင်သလဲပာင် [Problem] on 12th May 2010, 12:28 am
[You must be registered and logged in to see this link.] in Yae Kyaw TownShip .. sorry i'm using wif IE .. i cant type Burmese Font ... General Myo Aung Lett from Aircraft's class ... umm .. how shall i say .. apart from International Exam .. Sayar teach every thing about Basic Networking ... Once u finish this class .. u might got the headache coze u wont need to attend any other class .. this class is almostacomplete andacompaq class ... hee hee ... Sayar is teaching his student to CCNA .. and it is free of charge around 100 students are attending
11 Re: gmail server ဘယ်လိုထောင်သလဲပာင် [Problem] on 12th May 2010, 2:41 pm
၄၉ လမ်းနဲ့ဗိုလ်ချုပ်လမ်းထိပ်မှာ compu tech ဆိုတဲ့သင်တန်းကောင်းတယ်။
Exchange ကို စာဖတ်လုပ်တာထက်စာရင် သင်တန်းကဆရာနဲ့သင်ပြီးမှာ လေ့လာတာပိုကောင်းမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။
12 Re: gmail server ဘယ်လိုထောင်သလဲပာင် [Problem] on 23rd June 2011, 10:13 am
အကိုက G-mail Server ထောင်ချင်တာဆိုတော့ Domain နဲ့ သုံးပြီးထိုင်ချင်တာလား ဗျ ။ ဥပမာဗျာ.....yourname.yourdomainname.co.cc တို့လိုမျိုးနဲ.လား ။ Domain နဲ. Google App နဲ့ ကို ချိတ်ပြီး သုံးရတဲ့ ဟာမျိုးလေ။
13 Re: gmail server ဘယ်လိုထောင်သလဲပာင် [Problem]